Fanombohana ny tsingerintaona faha-40: nahanjahanjan’ny fanjakana sy ny mpanao politika ny FFKM | NewsMada
Fanombohana ny tsingerintaona faha-40: nahanjahanjan’ny fanjakana sy ny mpanao politika ny FFKM
Rehefa inona vao miantso vonjy na mitodika amin’ny fiangonana? Midika ho fanaovana tsinontsinona ireo raiamandreny sy olobe eo anivon’ny FFKM ny tranga niseho, omaly.
Tsy nisy nipoitra niatrika ny fanombohan’ny fankalazana ny faha-40 taon’ny FFKM tamin’ny alalan’ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana tetsy Antanimena ny mpitondra fanjakana. Na solontena aza, tsy nisy. Tsy tazana koa ireo mpanao politika: na mpanohitra na mpomba ny fitondrana. Tahaka izany koa ireo fiarahamonim-pirenena. Nihanjahanja samirery ny komitin’ny fankalazana sy ireo filoham-piangonana efatra mirahalahy. Tsy nahagaga raha nahitsy ny ranombavaka nentin’ny mpitandrina, Andriamahazosoa Irako: «… Mangataka ny famindram-ponao Andriamanitra manoloana ny hadalana sy ny fahotana eto amin’ny firenena…”, hoy izy. Nentina am-bavaka tamin’izany izao tsingerintaona izao sy ny 40 taona ho avy.
Mitarika any amin’ny fisarahana ny fahotana…
Nanitrikitrika tamin’ny toriteniny kosa ny Rev. Rakotonirina David fa misy ny fototry ny olana eo amin’ny fiarahamonina sy ny firenena ary ny fiangonana, niainga tamin’ny Soratra Masina: “Aoka hiray hevitra sy saina ianareo ka hivondrona tsara” (1Kor.1.10 Diem). “Mitarika ny fisarahana sy ny fizarazarana ny fahotana. Fisarahana amin’Andriamanitra sy ny namana… Mila miray saina sy fo isika raha manaraka ny tenin’Andriamanitra”, hoy izy. Notsiahiviny avy eo fa tsy mora ny niaingana tany amin’ny 40 taona lasa sy nahatongavana amin’izao fotoana izao.
Nitondra anjara biriky teto amin’ny firenena ny FFKM
“Nitondra ny anjara birikiny eto amin’ny firenena ny FFKM na sarotra aza izany. Na teo koa aza ireo nisintona lakolosy araka ny fitenin’ny tanora. Tafita ihany anefa satria matanjaka ny finoana sy ny fanantenana amin’ny hoavy ary hihamafy ny fiombonana. Hihamafy orina izany ary hampitombo ny fitahiana ny firenena sy ny vahoaka malagasy”, hoy ihany izy tamin’ny toriteniny.
Tsiahivina fa maromaro ireo mpitantana sy tompon’andraikitra nahavitabe eo anivon’ny FFKM notolorana mari-pankasitrahana sy fahatsiarovana amin’izao tsingerintaona izao. Hitohy amin’ny hetsika samihafa ny fankalazana ary hifarana amin’ny septambra 2020.